भण्डारीको विषयलाई लिएर योगेश र अष्टलक्ष्मीले ओलीको सातो खाए, नेपाल चुँइक्क बालेनन् !
ARCHIVE, POLITICS » भण्डारीको विषयलाई लिएर योगेश र अष्टलक्ष्मीले ओलीको सातो खाए, नेपाल चुँइक्क बालेनन् !
काठमाडौँ – राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्न बोलाइएको एमाले स्थायी समिति बैठकमा अधिकांश नेताहरुले विद्या भण्डारीको विरुद्धमा बोलेका छन् ।
मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा माधव नेपाल विद्याकै पक्षमा देखिएका थिए । उनले पार्टीभित्र आफू गुटबन्दीको चर्को मारमा परेको भन्दै गुनासोसमेत पोखे । एमाले युवा नेता योगेश भट्टराईले राष्ट्रपतिमा पुरानालाई स्थान दिन नहुने भन्दै आक्रोश पोखे ।
ओलीविरुद्ध खनिएका भट्टराईले भने, ‘पार्टी कसरी लाउनुहुन्छ ? कार्यकारी प्रमुख भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन नहुने हो भने हिजो गिरिजाप्रसादलाई किन बनाउन खोजियो ? सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपतिको अफर गर्ने तपाई कमरेड केपी ओली कामरेड नै होइन ? अहिले पार्टी एकता गरिरहँदा प्रचण्ड राष्ट्रपति हुन तयार भएको भए हामी मान्थ्यौं कि मान्दैनथ्यौं ?’
त्यस्तै आफूलाई मुख्यमन्त्री नबाएको झोंक हिजोको बैठकमा ओलीसँग राम्रैसँग पोखेकी थिइन् । उनले महिला भए पनि कसैलाई काख कसैलाई पाखा गरिएको आरोप अ‍ोलीमाथि लगाइन् । उनले भनिन्, ‘ एकजना महिलालाई राष्ट्रपति दोहोर्यााउने कुरा गर्दा पार्टीमा सबैभन्दा त्याग र इतिहास बोकेको अर्को महिलालाई लात्तले हानेर भित्तामा पुराउने कति न्यायोचित हो रु’ बैठकमा अष्टलक्ष्मीले प्रश्न गरिन्, ‘मैले राष्टपति, प्रधानमन्त्री दावी गरेकी थिइनँ, एउटा मुख्यमन्त्री बन्छु भन्दा मलाई लात हानियो । मेराविरुद्ध शीतलनिवासबाट विद्रोह गराइयो, गुटबन्दी गरेर शीतलनिवासबाटै उम्मेदवार खडा गरेर चलखेल गरियो । यो पार्टीमा कसैको आँशु कसैको हाँसो भयो ।’
त्यस्तै बैठकमा वामदेव गौतम भने मौन देखिएका थिए । उनले कसैको पक्ष र विपक्षमा बोलेनन् ।
विद्यालाई दोहोर्याउने कुरा पहिल्यै बुझेका झलनाथ पनि अ‍ोलीमाथि खनिए । उनले पार्टीले गर्ने निर्णयहरु संस्थागतरुपमा हुनुपर्नेमा अध्यक्षले एकलौटी गरिरहेको आशय व्यक्त गरे ।